Izinto ezi-5 ukwaziwa malunga neeKhamera zoMzimba waMapolisa | Izisombululo ze-OMG
Iikhamera ezinxibe umzimba aziyonto intsha ngokupheleleyo kwesi sizukulwana. Rhoqo sihlala siqaphela abagada bokhuseleko kunye neearhente zomsebenzi wokufihla zisebenzisa le nto ngobukrelekrele ngelixa isebenza. Njengayo nayiphi na itekhnoloji, ikhamera enxibe iimpahla zomzimba wamapolisa iba yinto entsha kwii-arhente zogcino lomthetho. Njengoko iiarhente ziqhubeka ngokuthe kratya kunye neenkqubo zazo, kubalulekile ukuba zijonge ngokunzulu kwinkqubo yecamera enxibe umzimba kwaye zihlalutye ukuba ngaba kufanelekile na kwaye kukho isizathu sokuzisebenzisa.
Xa kusondela ifomu uluvo loluntu ngalo mbandela, kubonakala ukuba kukho ukonyuka kokuphendula ngokusobala nokubonakala elubala kwamapolisa xa bekwiinqanawa ezinxibe umzimba. Izifundo zibonakalise ukuba indlela yokuziphatha kunye nobungcali babonwa kwinqanaba lokuphakama kwayo, ayisiyonto intsha njengoko iqhelekile nje, abantu ngokwendalo bathanda ukuziphethe kakuhle xa behlala besazi ukuba banokuphononongwa. Babonwa ukuba bayakuphepha ukusebenzisa amandla xa kungekho mfuneko okanye kuthintela ukusebenzisa amandla ngokubanti ukuze babambe.
Izibonelelo zatsalwa ligosa ngelixa lalikwiikhamera ezinxibe umzimba
Ayizindaba ukuba iiarhente ezininzi zokunyanzelwa komthetho zineembono ezichaseneyo malunga neekhamera ezinxibe umzimba, abaninzi baziva bengonwabanga malunga nokuyinxiba ngelixa besebenza. Ezinye izibonelelo kunye neenkxalabo eziqwalaselweyo zezi:
Ukuba nomfanekiso ocacileyo wesimo sengqondo sokwenyani somntu, ihlala iyingxaki xa ubamba ipunk ngokungaziphathi kakuhle nangokuchasene nomthetho. Ngamanye amaxesha, aba bantu baphethwe gwenxa banokubonwa benxiba iingelosi kwisuti kwaye bethetha ngokuzolileyo. Oku kunokuba yinto ekhathazayo kodwa ngekhamera enxibe umzimba, ividiyo ebonisiweyo inokuthi ngokulula ihlazo okanye i-charade bangazama ukuyinyusa. Oku kunokuba luncedo kakhulu xa kutshutshiswa.
Ubume bekhamera obungenasiseko, siyayithemba ngokwemvelo into esinokuyibona ngamehlo ethu amabini, le yinto eqhelekileyo. Kuhlala kulula kakhulu ukuvelisa ubungqina bevidiyo ukunceda ityala, kufuneka uthathe ijaji okanye umgwebi esitratweni ukuze ubabonise ukuba kwenzeka ntoni apho. Xa bebona ngamehlo abo, ukwenza isigqibo kuba lula kakhulu kubo.
Ngokwazisa kweekhamera ezinxibe umzimba, kuyabonakala ukuba kuye kwakho ukuncipha kwezikhalazo nezityholo ezibhekiswa kumagosa asebupoliseni. Abantu bathambekele ekuziphatheni ngakumbi kwaye bathobele ngakumbi xa besazi ukuba kukho ithuba lokuba babekwe esweni.
Ukuncitshiswa okukhulu komthetho wobulungisa kulwaphulo-mthetho ekubeni abenzi bobubi bavuma ukubabekwa ityala xa kanye kudlaliwe ubungqina bevidiyo kubo. Nje ukuba ubanjiwe kwesi senzo inakho ukuboniswa ngokulula nakubani na, oku kunciphisa ukubakho okanye ukuvuma kwakhe nabani na ozikhusela ngenxa yazo zonke iinxalenye zobungqina.
Bekusoloko kukho ingxaki yokuba amapolisa mani awarekhoda kwaye kufuneka abhale phantsi yonke into? Ewe, le yingxaki enkulu, iiCams zomzimba zinakho ukubuphelisa ubudlelwane ipolisa ebelilwakha ukusukela kokufika kwalo mkhosi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba amangqina akwindawo yolwaphulo-mthetho athanda ukuhlala engaziwa kwaye angenza konke okusemandleni ukuthintela ukurekhodwa. Olunye olu khetho, lunika isikhokelo samapolisa malunga nokuba kufuneka asebenzise njani ukuqonda aze anike iiparameter eziya kukhokela ukusetyenziswa. Zimbini iindlela eziphambili zokuqonda:
Umntu ufuna igosa ukuba lirekhode lonke unxibelelwano noluntu kwaye kungekuko ngexesha lokutsala umnxeba, kubalulekile ukuba urekhode nkqu nengxoxo engacwangciswanga kunye nabemi. Kodwa ngokwemithetho ethile, ukufuna ukuba ipolisa lirekhode konke oku kuyabucekisa ubumfihlo babemi kwaye ukuyityeshela kunokuba yinto ephosakeleyo kwaye ekugqibeleni kubuye umlilo.
Enye into kukuba igosa lenze ukuba inkonzo yakhe isebenze. Ezi nkonzo zinokubandakanya: ukukhangela, ukugcwala, ukubanjwa, ukumiswa, ukusukelwa nokuncinwa. Ukugcina irekhodi kwindawo enolwaphulo-mthetho ebomini kunokuba luncedo kwaye kuncede ukusombulula ityala lolwaphulo-mthetho ngokukhawuleza.
Ukuqonda yinto ebaluleke kakhulu kwaye kufuneka iqatshelwe, oku kubaluleke kakhulu njengoko unokwaphula ubumfihlo babemi kwaye oku kunokukhokelela ekuvuseleleni. Kubalulekile ukuba uqaphele amaxesha ukuba ungarekhodi isiganeko; njengoko amaxesha anokuthi angakhuselekanga, angabi namsebenzi okanye abe engenakwenzeka. Oku, nangona kunjalo, kufuna amagosa abhale amaxwebhu malunga nokuba kutheni bekhupha iikhamera zabo ezinxibe umzimba.
Ukufakwa kweekhamera ezinxibe umzimba, kubanike ithuba elaneleyo lokukwazi ukusebenzisa itekhnolojiyokukhumbula ubuso ukubona abantu ababandakanyekayo kwimeko. Ukusetyenziswa kwale khamera kuvumela igosa ukuba lirekhode indawo elihlala kuyo, ukuza kuthi ga ngoku banamalungelo asemthethweni okuba lapho. Elinye icandelo elijolise kulo, kukuba ubude beefama zingagcinwa, zisetyenziswe, zigcinwe okanye kubhekiswa kuzo. Oku kuhlulahlulahlula-hlula kubungqina bokuhamba kweenyawo nobungqina. Izinto zangaphambili zendlela ezinokusetyenziselwa iinjongo zophando ngelixa ezokugqibela zibandakanya ukubekwa kweenyawo akukho xabiso okanye ubudlelwane nophando, ngenxa yoko alunamsebenzi. Kubalulekile ukuba uqaphele into yokuba igosa lingarekhoda imibuzo kunye nomrhanelwa, kodwa kuya kuba kuphosakele ukurekhoda udliwanondlebe naye nawuphi na umntu osesitalatweni. Kuyinto engenasiphoso kwaye le migca akufuneki inqamlezwe.
Kulungile ukuba uqaphele ukuba iicams ezinxibe umzimba zinoncedo oluninzi, kodwa kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba uqeqesho kufuneka lunikezwe amapolisa kwaye ubenzise ukuba bayazi ukuba bayalusebenzisa nini kwaye bayilusebenzisa njani. Ukubaluleka kokuqonda akunakugxininiswa kakhulu.
Imali eninzi ebinokuchithwa ngenye indlela kumatyala enkundla igciniwe, kusoloko kulula kakhulu ukubona izinto zikwisitayile kwaye kuthintelwe ukuqukwa kweseshoni yenkundla. Abaphandi kuphando olukhokelwe yi-lab kwisebe le-DC nakwi-DC Metropolitan bajonga ukuba ngaba ukubakho kwekhamera enxibe umzimba kumagosa kuye kwaneziphumo ezibi kakhulu. Babone ukuba amagosa aneekhamera ezazinxibe umzimba ayabandakanyeka kumatyala enkundla nangona kunjalo, zazininzi izinto ezazingaqinisekanga kuba babevinjwa ukufikelela kwiziphumo zenkundla.
Izinto ze5 ukwazi malunga neeKhamera zoMzimba waMapolisa gqibela ukuguqulwa: Oktobha 9th, 2019 by admin
2456 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-21 Namhlanje
Kutheni i-body-Cam Footage isenokungazicacisi izinto
Izizathu Zomzimba wekhamera ye-Worn Camera isenokungazicacisi izinto
Ngaphandle kokushokoxeka, iikhamera zoMzimba waMapolisa zi…